(-) South Sudan
Improving effectiveness of evidence use to support Zimbabwe’s youth
This article looks at knowledge, information and policy making in the Ministry of Youth, Indigenisation and Economic Empowerment in Zimbabwe.
Country profile: Zimbabwe
This document reviews current literature on the condition of Zimbabwe’s research and knowledge system and provides political-economic analysis on how this system operates.
Establishing a Research and Policy Coordination Unit in Zimbabwe’s Ministry of Youth, Indigenisation and Economic Empowerment
This case study looks at research evidence and youth policy in Zimbabwe.
Zimbabwe University Libraries Consortium: a profile
This case study looks at the growth and impact of the Zimbabwe University Libraries Consortium (ZULC), and the role that INASP has played in its development.
Country profile: South Sudan
An analysis of research and knowledge systems in South Sudan prepared for INASP by Jok Madut Jok, with a political analysis by Jason Mosley.
Mentorship Programme: A Strategy for Evidence-Informed Policy Making in Zimbabwe
This report looks at the mentorship programme that was implemented in Zimbabwe by the VakaYiko consortium as part of the Building Capacity to Use Research Evidence (BCURE) programme.
Knowledge Cafe on Use of Evidence in Gender Mainstreaming
This is a report of a gender mainstreaming knowledge cafe that was held in Zimbabwe in 2015.
Policy Dialogue Improving Trade and Industrial Policy Coordination between Government and Private Sector
This policy dialogue seeks to deepen the dialogue and coordination between government and the private sector, and increase the use of evidence in trade and industrial policy formulation.
VakaYiko Strategy for Policy Dialogues and Knowledge Cafes in Zimbabwe
This document is a general strategy for policy dialogues and knowledge cafes to help guide the planning process and preparation of these events as well as the communication with partner ministries, carried out as part of the VakaYiko programme.
Strategy for Evaluating Evidence-Informed Policy Making Training Courses in Ghana and Zimbabwe
This strategy seeks to define the scope and approach of monitoring and evaluation (M&E) of VakaYiko EIPM training courses in Ghana and Zimbabwe.
Needs Assessment: Evidence-Informed Policy Making Course in the Parliament of Zimbabwe
An assessment to understand the training needs of members of the Administration of the Parliament of Zimbabwe.
Needs Assessment: Evidence-Informed Policy Making Course in the Ministry of Industry and Commerce, Zimbabwe
This assessment seeks to understand the needs that members of the Ministry of Industry and Commerce (MIC) in Zimbabwe have in terms of accessing research information, and evaluating and using it.
Trust and transparency are key to a successful consortium
In this case study, Agnes Chikonzo – University of Zimbabwe Librarian and Country Coordinator for the Zimbabwe University Libraries Consortium (ZULC) – discusses what it takes to develop a successful library consortium.